थाहै नभई भित्र भित्रै भएको हुन सक्छ मुखमा क्यान्सर, यसरी सकिन्छ थाहा पाउन र बाँच्न – Etajakhabar
थाहै नभई भित्र भित्रै भएको हुन सक्छ मुखमा क्यान्सर, यसरी सकिन्छ थाहा पाउन र बाँच्न
काठमाडौं – मुखको क्यान्सर नेपालमा पनि गम्भीर समस्या बनेको छ । मद्यपान र धूम्रपान नै मुखको क्यान्सरको प्रमुख कारण हो । वेलैमा सजग रहन डा. राजेन्द्र बराल भन्छन् : डा. राजेन्द्र बराल क्यान्सररोग विशेषज्ञ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल
कारण र लक्षण सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्नु नै मुखको क्यान्सरबाट जोगिने प्रमुख उपाय हो । मद्यपान, सुपाडीजन्य पदार्थ, रासायनिक तथा अखाद्य पदार्थ खानुहुँदैन । सन्तुलित खाना, हरियो सागपात र फलफूलमा जोड गर्नुपर्छ । खाएपछि मुखको सफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । नुन कम हालेका खानेकुरा खानुपर्छ ।
मुखमा विभिन्न दाग देखिनु क्यान्सरको लक्षण हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ घाउ नदुख्न पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ । मुखमा भएका परिवर्तन, घाउ–खटिरा, दाग सजिलैसँग देख्न सकिन्छ ।
जोगिने उपाय -मुखको क्यान्सर भएका बिरामीमध्ये ९० प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइन्छ । धूम्रपानबाट ३५ किसिमका विभिन्न रोग लाग्न सक्छ ।
-मद्यपान पनि मुखको क्यान्सर गराउने एक प्रमुख कारण हो । जुनसुकै प्रकारको र मात्राको रक्सी सेवन गर्दा पनि मुखको क्यान्सर हुन सक्छ । सुर्ती र रक्सी सँगै सेवन गर्दा मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना १५ गुणाले बढ्छ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । -जंकफुड, केमिकल हालेको सागसब्जी खाँदा पनि मुखको क्यान्सर हुन सक्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ०९, २०७४ समय: ९:२३:१८
रोटी चिसो हुनबाट यसरी बचाउनुस्